NK | प्रत्येक दिन आमाको मुख हेर्ने दिन बनाउन मन छ
प्रकाशित मिति: १७ बैशाख २०७९, शनिबार
दाङ । आज आमाको मुख हेर्ने दिन रे, यो कस्तो दिन रहेछ मेरी आमा ? वर्षमा एक पटक मात्र आउँने ? मलाई लाग्ने गर्थ्यो कि आमाको मुख हेर्न कुनै दिन पर्खिनुपर्दैन । न त कसैले तोकिरहनु पर्छ ? तर आमा जुन दिन कानमा गुन्जियो आमाको मुख हेर्ने दिन।
आमा तिमीलाई आज हामीले बढी सेवा माया ममता गर्नुपर्ने ? अनी भोली कम ? के आमा तिमी मलाई भोलि चोट लाग्दा आफ्नो आँसु रोक्न सक्छौं ? हैन भने कसले यो दिन बनायो मलाई भेट्न मन छ, अनि प्रत्येक दिन आमाको मुख हेर्ने दिन बनाउन मन छ।
टाढिएका छोराछोरीले धेरै सम्झिनुपर्ने नजिककोले वेवास्ता गर्नुपर्ने यो कस्तो दिन हो आमा ? आमा देवी हुन् भन्छन्, आमा देवी हुन् भने बुवा पनि त देवता नै हुन् नि । आमा जननी हुन् । मेरो हौसला हुन् । र मेरो बुवा प्रेरणा, मेरो जीवनको मार्गदर्शन हुन्।
हिजो साथीसँग हल्का पार्टी, घुमघाम भन्दै रङ्गिएका सामाजिक संजाल आज एकाएक आमाहरुका तस्बिरले रङ्गिएको, देखेँ । आमा तिम्रो सस्तो मूल्य देख्दा ति मान्छे प्रति घृणा लागेर आयो । यो कस्तो संस्कृति ल्याएका उनीहरुले,आफ्नै आमाको मुख हेर्न पनि,दिन कुर्नुपर्ने ?
जब म दुखमा छटपटाएको हुन्छु, आमा तिमीलाई सम्झन्छु,जब म विरामी हुन्छु, जब मलाई भोक लाग्छ, जब आकाश गर्जिएर बिजुली चम्कन्छ, जब भगवानको नाम सुन्छु, जब दुनियाँमा एक्लो हुन्छु, अनि जब माया शब्द सुन्छु, आमा तिमीलाई सम्झन्छु। आमा तपाईको आशिष छ,र त मेरोअस्तित्व छ,यो सृष्टि छ, र मैले सिकेको छु, सत्यको बाटो हिंड्न हिडाउन ।
तिमी आफै भन् , तिमी मेरो मुख हेर्न कुनै दिन कुर्नु नपर्ने, तर मैले किन तिम्रो मुख आज मात्र हेर्नु पर्ने ? म पनि तिमीलाई हुनेखानेले मिठो मिठो खाने कुरा र सुनचाँदीले सजाउँलान् । तर गरिखानेले जिवन भरी मनमा सझाएर राखेको कुनै शब्द छैन आमा, यो दिन हुनेखानेको लागि मात्रै रहेछ ।
आमा किन उनिहरुले भनेका, आज तिमिलाई भेट गरी मुख हेर्नै पर्छ र, मिठो मसिनो खुवाएर आशिष लिनै पर्छ ? हिजो, अस्तिको माया ममता ती सबै स्वार्थको खेल थियो र ? आमा म सँग वर्णन गर्ने कुनै शब्द छैन । तर मेरो कारणले मेरी आमाको आँखामा कहिले आँसु आउने छैन,र बाबाको शिर कहिले झुक्ने छैन,मेरो कारणले मेरी आमालाई सधैं खुशी दिन पाऊँ, मेरी आमा आमाको तस्वीरलाइ आफ्नो मन अनि बचनमा सजाउ,
जिवनमा मैले सोचेजति उपलब्धी हासिल गर्न नसकेपनि मेरो कारण तपाईहरुको शिर कहिल्यै झुक्ने छैन्,सारा कुरा भुलेर फेरि,मेरा बा आमाको निम्ति केही गर्न मन लाग्यो।
जहाँ छु छु सिर्फ हजुरको निम्ति बाआमा वर्षको एकचोटी माता तिर्थ औसीको दिन फेसबुकको भित्तामा होइन। आमा देवी हुन र बाबा मार्गदर्शन जसलाई हरदिन पुज्ने अनि बुझने गर । कुनै‌ बा आमाले बृद्धआश्रम टेक्न नपरोस।
कुनै सन्तानले अनाथ आश्राम देख्न नपरोस।
मातातिर्थ औंशीको शुभकामना ।